Rubric: Mutemo wemhuri
Ndezvipi basa rekuongorora vechidiki maererano nevechiri kuyaruka? Muhupenyu, zvinowanzoitika kuti vabereki chete ndivo vanobata. Uye taura uye nyora zvirevo. Basa rekuongorora rinodzorwa ...
Chii FSA? nezvinonhuhwira ichi Federal Treasury (chefuma Russia) Federal Executive simba (yeUnited basa), akaita maererano Russian kwemitemo mabasa kuitira kuti yeUnited bhajeti kuuraya, mari ...
Taura, pasi pemamiriro api ayo baba vanogona kubata mwana kubva kuna amai panguva yekurambana? Kana nzvimbo yake iine ruzivo pakuona korare. Zvakanyanya zvose subjectively !!! Zvimwe, mikana yakawanda zvikuru, kana yakatorwa kamwe ...
Alimony yakaverengwa kubva muhomwe yezere kana yakatova nemutero? Vari kunyanya kutora alimony kubva pamutengo wekutanga here? Somuenzaniso s / n 15 000, yevamwe, alimony 25% inotorwa. Uye chete ipapo mutero unotarirwa ...
Pachikonzero cheChitsauko 69, RF CC inogona kuraswa kusununguka mumatare, uye ndeapi magwaro anodiwa? Chikwangwani chokuberekwa, pasipoti uye zvinyorwa zvinotsigira kudai kwako. Chisungo 69. Kunyanya ...
Sei kuwana mudyandigere mumari mushakabvu hama? sei kuti vawane mudyandigere wababa mushakabvu mune asiri haibatsiri sangano mudyandigere Fund atomgarant chii mari inobhadharwa tinofanira kugara mushakabvu kana 1974goda pakuzvarwa uye akafa 2012 ...
Ndezvipi zvikonzero zvinogona kubvisa kodzero dzekuberekwa? Art. 69 SC RF - Vabereki / mumwe wavo / angave anoremekedzwa kodzero dzevabereki kana iye: akavhara basa rebasa revabereki, kusanganisira kana ...
mushure mekufa kweumwe wevakaroorana vanowana dzimba? mudzimai nevana. kana pakutanga kwemukadzi, uye mushure mokufa kwake vana, mudzimai, vabereki veafi vatove panguva imwe chete vachipona.
Nzira yekupikira mhinduro kumashoko ekuzviti iwe pachako? izvi zvinonzi kudzokorora. . nyora muzita remutongi, uyo akatongwa nyaya yacho, ratidza muchengeti, mumiririri, uye mushure mekutsanangurira nyika yako ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti zvinyorwe kuchengetedza? Zvakawanda. Iwe unofanirwa kuenda kumuchengeti uye ikoko iwe uchapiwa runyorwa, uchapa zvikumbiro kune mamwe masangano uye kupa mazano ekufamba kwouchi. rubatsiro ...
Vabereki vanorera vanobhadhara zvakadini mwana wacho? ... Mari yakabhadharwa uye zvikwereti kune mwana anokurera
Marii yavanobhadhara kumirira vabereki kumwana? ... Kukura kwemabhadharo uye kubvumirwa kwemwana asiri iye mubhadharo wemari yekuchengeta vana vanochengeta vana Mubairo wemari unobhadharwa pamwedzi chikafu, kutenga mbatya, shangu, zvinyoro ...
Kana iwe uchirambana unofanira kunge uchinyora kushandiswa kweimba? Uye iwe unogona kuzviita gare gare, mushure mekurambana? Kwenguva yakareba sei? CHIKAMU CHOKUDZIRIRA KWEMIKANDI YENYIKA PAKATI PAKUTANGA ...
Mibvunzo ye98 mu database yakagadzirwa mu 0,815 masekondi.